İBB 17 waxay qaadatay taxaddar aan caadi ahayn oo ku saabsan riyooyinka taraafikada ee Sebtember | RayHaber | raillynews
[10 / 04 / 2020] Dawlada Hoose ee Magaalaweynta Opzmir Waxaa La furay Daawaynta Qashinka Caafimaadka	35 Izmir
[10 / 04 / 2020] Madaxweyne Erdogan: Wadada Tareenka ee loo yaqaan 'BTK Railway' Ayaa Bixin Doonaysa Gaadiidka Xamuulka	06 Ankara
[10 / 04 / 2020] Istanbulites Waxay Ka Heleyaan Maskarada Bilaashka ah Farmasiiyada	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIMM 17 waxay qaadatay tallaabooyin aan caadi aheyn oo loogu talagalay kabidda taraafikada bishii Sebtembar
13 / 09 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Iskuulada Magaalooyinka ee Istanbul (IMM), dugsiyada ayaa la furi doonaa Isniinta, September 17 si looga hortago dhibaatooyinka gaadiidka ee tallaabooyinka aan caadiga ahayn ee taraafiga. Qoraal qoraal ah, Ku Xigeenka Xoghayaha Guud ee IMM. Intii lagu guda jiray kulanka, oo uu guddoomiyay Mustafa Hacimustafaoglu, 17, halkaasoo laga furayo dugsiyada, ayaa sheegay in tallaabooyinka dheeraadka ah ee taraafikada loo qaaday si looga hortago dhibaatooyinka gaadiidka Isniinta.
Tallaabooyinka laga qaaday kulanka ayaa la soo sheegay sida soo socota: Iskuulada waxaa lagu furi doonaa jawiga iskuulada waxaa lagu qaadi doonaa tallaabooyinka taraafikada ee degdegga ah waxaana la heli doonaa tiro badan oo munaarad ah. Mashruucyada jidadka ee socda ayaa la dhammaystiri doonaa ka hor maalinta dugsiga furan oo aan la samaynin shaqooyinka wadada gawaarida ilaa todobaadka dugsiyada la furo. Daraasadaha khasabka ah waxaa la qaban doonaa habeenkii.
SAAMEYNTA GAADIIDKA GARGAARKA 7 SAACAD KU SAABSAN ADEEGYADA BILAASH AH
Maalinta furitaanka dugsiyada, gaadiidka dadweynaha wuxuu bixin doonaa adeeg lacag la'aan ah saacadaha 06.00-13.00. Adeegyada ardayda, iskuullada maalinta ugu horreysa ee furitaanka si looga hortago taraafikada illaa usbuuc ka hor intaan diiwaangelinta ardaydu dhammayn. Meelaha ardayda loo qaadi doono ayaa la go'aamin doonaa. Xirfadlaha ayaa ardayga ka qaadi doona gurigiisa wuxuuna u kaxeyn doonaa guriga. Iskuul ma tagi doono iyada oo aan arday ahayn. Gaadiidka iskuulku wuxuu lacag la'aan ku dhigan doonaa saacadaha 2 bilowga gelitaanka iyo ka bixidda dugsiga ee Ispark ee iskuulka maalin kasta. Waxaa intaa dheer, adeegyada dugsiga iyo shaqaalaha waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan jidka baska ee ay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha. Waxaa intaa dheer, adeegga jiidista lacag la'aanta ah waxaa lagu bixin doonaa dhibic 9. Gawaarida ganacsiga ama gaadiidka gaarka ah ayaa loo oggolaan doonaa hor istaaga joogsiga baska. Goobta basaska ee joogsiga basaska ee joogsiga basaska iyo gawaarida ayaa lagu dabaqayaa ciqaabta la isticmaali doono. IETT waxay ku dari doontaa adeegyo dheeraad ah khadadka metro iyo basaska. Khadadka magaalada ayaa kordhin doona adeegga gawaarida. Metro, Light Metro-Funicular ayaa qabanqaabin doona duulimaadyada ugu badan.
Booliska, Gandarmarka iyo Sarkaalka Booliska ee la Kiciyey
Bilayska 559 ayaa u adeegi doona si loo hubiyo socodka gaadiidka. Maalinta dugsiyadu furan yihiin, askarta booliiska ee bixiya adeegyadda, Shaqaalaha Waaxda Booliska ee Degmada ayaa ku siin doona amarka taraafikada halbowlayaasha waaweyn. Goobta Sarkaalka Gandarmarka Gandarmarka Gobollada ee Gobolka ayaa la shaqeyn doona qiyaasta shaqaalaha 800. Kumanaan ka mid ah Saraakiisha Boliiska ee ku yaalla waddooyinka ku hareereysan iskuulada ku yaala Istanbul ayaa ka caawinaya qabanqaabinta gaadiidka.
Isha: gundem.milliyet.com.t waa
YOLDER waxa uu ansixiyay shirwayn aan caadi ahayn oo loogu talagalay wax ka beddelka
Gaadiidka Turkiga - Waxaad 3. Golaha Guud ee aan caadiga ahayn
RESTDER Natiijada Golaha Guud ee aan caadiga ahayn
IMM Brings eri Cezeri oo ah Mashiinno aan caadi ahayn oo Istanbul ku yaalla Istanbul
Mashruuca Teleferik Alanya 27 wuxuu ku jiraa hindise sannadka labaad ee bisha Sebtembar
Ra'iisul Wasaaraha Erdogan: Mashruuca Marmaray waa la dhammeeyaa bisha Sebtembar
Gawaarida cusub ee Konya ayaa la kulmi doona Sebtembar
Munaasabada Tea Festival ee Sebtembar ee Xarunta Haydarpaşa
Ankara YHT Terminal Service ee Sebtembar
Codsiga Bannaan ee Bannaanka Dheeriga ah iyo Baaskiilka 10 Waxaa la bilaabay Sebtembar
TCDD 108 codsiyada qorista joogtada ah 29 waxay ku dhamaanaysaa Sebtembar
Tani waa kabaddi habeenkii ah ee baaskiilada.
Kabaha cabsida baabuurta ee Chile
Kabaha tareenka ee kuyaala Cartouch Beşevler
Kordhin dheeraad ah
IETT waxay bilowday xilliga qaboobaha
Ammaanka sare ee loo yaqaan "Red Crescent-Dikmen"
Kahramanmaraş’ta Ücretsiz Maske Dağıtımı Başladı
Daraasadaha Ka-hortagga Cudurka 'Disinfection'
Dawlada Hoose ee Magaalaweynta Opzmir Waxaa La furay Daawaynta Qashinka Caafimaadka
Madaxweyne Erdogan: Wadada Tareenka ee loo yaqaan 'BTK Railway' Ayaa Bixin Doonaysa Gaadiidka Xamuulka
Istanbulites Waxay Ka Heleyaan Maskarada Bilaashka ah Farmasiiyada
77% Shirkadaha Dalbada Gunnada Shaqada Waqti-Gaaban ee Shaqaalaha Aan Ka Yar 10 Shaqaale
Baadhitaanka Kaamerada Dabaysha ee Dabaysha ayaa laga Bilaabmay Xarumaha metrooga
İZBAN, Bas, Tram iyo jumladaha Ferry Waqtiga Isbadalku wuxuu ku dhacay İzmir!
Daraasadda Saldhigga Tareenka ee Saldhigga Tareenka ee 42 Evler wuxuu sii wadaa
Maktabada Dijitaalka ah ayaa hada ku taal guriga Izmir
380 shaqaale ah oo reer Darülaceze ayaa sii wadi doona inay u adeegaan martidooda!